तरकारीखेतीको आम्दानीबाट कृषि प्रविधिको शिक्षा | गृहपृष्ठ
Home समाचार तरकारीखेतीको आम्दानीबाट कृषि प्रविधिको शिक्षा
तरकारीखेतीको आम्दानीबाट कृषि प्रविधिको शिक्षा
पुस २०, काठमाडौं । काभे्रपलाञ्चोक जिल्ला जैसीथोक गाविस-४, राम्चे निवासी रामहरि सापकोटाले तरकारीखेतीबाट कमाएको पैसाले छोरालाई कृषि प्राविधिक बनाउँदै छन् । विसं २०५४ देखि निरन्तर बेमौसमी तरकारीखेती गर्दै आएका उनले छोरालाई कृषि प्रविधि पढाउँनुका पनि केही कारण छन् । कृषिसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको कमीले आफूले कृषि कार्यमा भोग्नुपरेका समस्या भविष्यमा नदोहोरियोस् भन्ने इच्छाले उनले छोरालाई कृषि प्राविधिक पढाउने अठोट गरेका हुन् । उनका छोरा उमेश सापकोटा यसै शैक्षिक सत्रदेखि कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, चितवनमा कृषि विषयमा स्नातक तह पढ्दैछन् । कृषक रामहरि अहिले बेमौसमी तरकारीखेतीबाट वार्षिक औसत रू. ५ लाख कमाउँछन् । तरकारीखेती शुरू गर्नुअघि उनको मासिक आम्दानी २/३ हजारभन्दा बढी थिएन । त्यो सीमित कमाइले उनलाई ६ जनाको परिवार पाल्न र घर व्यवहार चलाउन निकै गाह्रो पथ्र्यो । तर, बेमौसमी तरकारीखेती गर्न थालेपछि उनलाई यस्तो गाह्रो परेको अनुभव छैन । उनले करीब १३ रोपनी जग्गामा अहिले तरकारीखेती गर्दैआएका छन् । यस खेतीबाट आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार आएको उनको भनाइ छ । उनले अभियानसँग भने, ‘बाबु/बाजेले सिँचाइ नभएको जग्गामा गहुँ, गहत र तिलमात्र लगाउँदै आएका थिए, अहिले मैले परिश्रम गरेर तरकारी फलाएको छु, यसबाट राम्रो आम्दानी भएको छ ।’
सोही गाविसका ६० वर्षीय लोकनाथ पराजुलीले पनि १५ वर्षदेखि तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । उनले अहिले करीब १० रोपनी जग्गामा बाह्रै महीना तरकारीखेती गरिरहेका छन् । तरकारीखेतीबाट वार्षिक रू.१ लाख ५० हजारदेखि रू. ६ लाखसम्म आम्दानी गरेको उनले अभियानलाई बताए । सोही गाविसका नारायण सापकोटा पनि ८ वर्षदेखि तरकारीखेती गरिरहेका छन् । तरकारीखेतीबाट उनी पनि औसत वार्षिक रू. ३ लाख ५० हजार आम्दानी गर्छन् । तरकारीखेती शुरू गर्नुअघि यातायात व्यवसाय गर्दै आएका उनले छिमेकीले तरकारीबाट राम्रो आम्दानी गरेको देखेपछि यातायात व्यवसाय छोडेर तरकारीखेती शुरू गरेको बताए । बेमौसमी तरकारीखेतीबाट रामहरि, लोकनाथ र नारायणजस्ता सोही वडाका १ सयभन्दा बढी किसानको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । २०५३ सालदेखि ०५८ सालसम्म डेनिडाको सहयोगमा वातावरण तथा कृषि नीति अनुसन्धान, प्रसार एवम् विकास केन्द्र (सिग्रेड )ले कृषकका लागि आयमूलक आयोजनाअन्तर्गत ‘बेमौसमी तरकारीखेती’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । सोही कार्यक्रम शुरू भएपछि आफूहरूको आम्दानी वृद्धिको बाटो खुलेको किसानहरूको भनाइ छ । ‘सिग्रेड हाम्रो अभिभावक बनेको छ,’ एक किसानले भने ।
ती वडाका किसानहरूले काउली, बोडी, सिमी, घिरौला, भाण्टालगायत १२ किसिमका तरकारी उत्पादन गरी बनेपा, पनौती र काठमाडौंमा विक्री गर्दै आएको बताएका छन् । आम्दानीको करीब ४० प्रतिशत सिँचाइमा खर्च हुने उनीहरूले बताए । करीब ३ सय मिटर टाढाको चाखोलाबाट मेशिनले पानी तानेर सिँचाइ गरिरहेको उनीहरूले बताए । कुनै सङ्घसंस्थाले सिँचाइ सुविधा प्रदान गरिदिएमा आफूहरूलाई ठूलो सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । करीब रू. ३ करोडको लागतमा राम्चेमा बेमौसमी तरकारीखेती कार्यक्रम लागू गरेपछि किसानहरूको आर्थिक स्थितिमा निकै सुधार आएको सिग्रेडका कार्यकारी अध्यक्ष डा. हरिकृष्ण उपाध्यायले अभियानलाई बताए । ‘सिँचाइको सहज सुविधा नभएको जग्गामा पनि व्यावसायिक तरकारीखेती गरेर आर्थिक स्थिति सुधार्न सफल भएका छौं, यही नै हाम्रो कार्यक्रमको सफलता हो,’ उनले भने ।
लोकप्रिय बन्न थाल्यो सामुदायिक पशुबीमा
पुस २०, पर्वत (अस) । पर्वत जिल्लामा पशुबीमा कार्यक्रम लोकप्रिय हुँदै आएको छ । जिल्लाका तिलाहार, चित्रे, देउराली, वाजुङ, पकुवा, ठूलीपोखरी र खौला गाविसमा अहिले सञ्चालन भइरहेको पशुबीमा अभियानअन्तर्गत १ हजारभन्दा बढी पशुको बीमा गरिसकिएको सालघारी महिला समूह, वाजुङकी अध्यक्ष मञ्जु सुवेदीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘पशुबीमा गर्न थालेपछि पशुको मृत्युले पर्ने आर्थिक मारबाट हामी मुक्त भएका छौं ।’ उनका अनुसार अहिले बाख्राबाट पशुबीमा अभियान शुरू गरिएको छ । बीमा गरिने पशुको प्रारम्भिक मूल्यको ५ प्रतिशतका दरले समुदायले प्रिमियम रकम जम्मा गर्ने गरिएको छ । बीमा गरिएको पशुको मृत्यु भएमा प्रारम्भिक मूल्यको ८० प्रतिशत रकम पशुधनी कृषकले भुक्तानी पाउँछन् । सामूहिक पशुपालनतर्फ आकर्षित कृषकहरूले शुरू गरेको सामुदायिक पशुबीमा अभियानमा स्थानीय गैरसरकारी संस्था सीड नेपालले सहयोग गरेको छ । समूहले आफ्नै उत्तरदायित्वमा बीमा व्यवस्थापन गर्दै आएकाले बीमाकोषलाई दिगो बनाउने जिम्मा पनि समूहकै रहेको देउराली गाविसका ग्रामीण पशुस्वास्थ्य कार्यकर्ता रामचन्द्र उपाध्यायले बताए ।
सामुदायिक पशुबीमाको व्यवस्थापछि कृषक पशुपालन व्यवसायमा थप आकषिर्त भएका छन् । संस्था र समुदायको अग्रसरतामा शुरू गरिएको सो बीमाकोष परिचालनमा पशुसेवा कार्यालय तथा अन्य कुनै पनि सरकारी निकायबाट भने सहयोग प्राप्त नभएको प्रगतिशील महिला समूह, ठूलीपोखरीकी अध्यक्ष सीता लामिछानेले गुनासो गरिन् ।
तोरी उत्पादन बढ्यो
पुस २०, दाङ (अस) । दाङमा यस वर्षतोरीको उत्पादन २५ प्रतिशतले बढेको छ । गतवर्ष दाङमा १४ हजार ८ सय १२ मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएकोमा यस वर्ष१८ हजार ५ सय १८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, दाङले जानकारी दिएको छ । जिल्लामा १८ हजार ५ सय १५ हेक्टर जमीनमा तोरी बाली गरिन्छ । पर्याप्त वर्षा र रोगको सङ्क्रमण नहुनाले तोरीको उत्पादन बढेको सो कार्यालयका योजना अधिकृत तिलक केसीले अभियानलाई बताए ।
तोरीको उत्पादन बढेपछि जिल्लाका कृषक पनि खुशी देखिएका छन् । डुरुवा-६ पतखौलीका कृषक डिल्लीप्रसाद शर्माले मौसमले साथ दिएकाले तोरीको उत्पादन बढेको बताए । दाङ जिल्ला तोरी उत्पादनका लागि प्रसिद्ध मानिन्छ । दाङमा उत्पादित तोरी छिमेकी जिल्ला रोल्पा, रुकुम, सल्यान र प्यूठानका साथै काठमाडौं, बुटवललगायतका शहरहरूमा पनि विक्रीका लागि जाने गर्छ ।
कृषि बजार निर्माण शुरू
पुस २०, वीरगञ्ज अस) । वीरगञ्जमा कृषि थोकबजार निर्माण हुने भएको छ । सो बजार निर्माणका कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयबाट रू. १० लाख विनियोजन भइसकेको छ । बजारमा कृषि उपजको विक्रीवितरणका लागि सेडका साथै अन्य आवश्यक सुविधाहरूको व्यवस्था गरिनेछ । बजार निर्माणका लागि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा कृषि बजार उपभोक्ता समितिसमेत गठन भइसकेको सङ्घले बताएको छ ।
यसैबीच उपभोक्ता समितिको पहलमा बसेको बैठकले वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर-१९ को ४ बिगाहा १७ कट्ठा जग्गा बजारका लागि छनोट गरेको छ । बैठकमा राजनीतिक दल, उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा तथा व्यापारी वर्ग र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागिता थियो । बैठकले जग्गा छुट्टयाई उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा लगाउने र बजारसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्ने जिम्मेवारी उपमहानगरपालिकालाई दिएको छ । थोकबजार निर्माणको पहिलो चरणको डिजाइनिङलगायतको काम भने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पर्सासंगको समन्वयमा गरिने पनि निर्णय गरिएको छ । सङ्घका कार्यकारिणी सदस्य नरेश टिवडेवालको संयोजकत्वमा सो बैठक बसेको थियो ।संयोजक टिवडेवालका अनुसार बजार निर्माण कार्य चाँडै प्रारम्भ हुनेछ । उनले विनियोजित रकम बजार निर्माणका लागि कम भएकाले थप बजेटको आवश्यकता पर्ने पनि बताए ।
धानको लागतभन्दा विक्री मूल्य कम
पुस २०, महेन्द्रनगर (अस) । धानको मूल्य लागतभन्दा पनि कम भएपछि कृषकहरू मर्कामा परेका छन् । कञ्चनपुर जिल्लाका कृषकहरूले अहिले प्रतिक्विण्टल धानमा रू. १ हजारसम्म नोक्सानी बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कञ्चनपुरले पनि कृषकले लागतभन्दा न्यून मूल्यमा धान विक्री गर्नुपरेको पुष्टि गरेको छ । कार्यालयका बाली विकास अधिकृत कलकबहादुर सिंहले भने, ‘वैज्ञानिक प्रणालीबाट एक क्विण्टल धान उत्पादन गर्न २ हजार ४ सय रुपैयाँ जति खर्च हुन्छ, तर कृषकले बेच्नुपर्दा क्विण्टलको १६/१७ सयभन्दा बढी आउँदैन ।’ नेपाल खाद्य संस्थानको यहाँस्थित शाखाले प्रतिक्विण्टल मोटो धान रू. १६ सय २५, मध्यम रू. १६ सय ५० र मसिनो रू. १७ सय २५ मूल्य तोकेको छ ।
संस्थानका महेन्द्रनगर शाखा प्रमुख यदुनाथ भट्टले अस्पष्ट सरकारी नीतिका कारण किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले समयमा मलखाद, सिँचाइ, कीटनाशक औषधि र अन्य वस्तुमा आवश्यक सहुलियत दिन नसकेकै कारण किसानहरू महँगोमा उत्पादन गरेको धान सस्तोमा विक्री वितरण गर्न बाध्य छन् ।’ उनका अनुसार सरकारले कृषिका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरूमा सहुलियत दिने बित्तिकै किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मूल्य पाउनेछन् । संस्थानले दिँदैआएको मूल्य लागतको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहेको भीमदत्त नगरपालिका-८, तिलाचौरका कृषक रामदत्त जोशीले बताए । उनले भने, ‘यो मूल्यले त हाम्रो लागतको आधा पनि उठ्दैन । त्यसैले सरकारले यो मूल्यमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ संस्थानले अत्यन्त न्यून मूल्य तोकेपछि कतिपय किसानले आफूले धान नवेचेको बताएका छन् । तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका किसानहरू भने न्यून मूल्यमै भए पनि धान बेच्न बाध्य भएका छन् । सुडा गाविस-१, मुसेपानीका कृषक शङ्कर जोशीले धानमा हाल्न उधारो किनेको मलको मूल्य चुक्ता गर्न र घर्रखर्च गर्न न्यून मूल्यमै पनि धान बेच्नुपरेको बताए । उनले धानको मूल्यमा सुधार नआउने हो भने आउँदो वर्षदेखि आफूले धानखेती नगर्ने बताए ।
नेपाल खाद्य संस्थानको स्थानीय शाखाले यस वर्ष१० हजार क्विण्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य रहे पनि त्यति धान खरीद गर्न समस्या भइरहेको बताएको छ । शाखा प्रमुख भट्टले शाखाले गत वर्ष५ हजार क्विण्टल धान खरीद गरेको जानकारी दिँदै भने, ‘यस वर्ष त त्यति पनि पुग्ने सम्भावना छैन ।’ मूल्य अत्यन्त कम भएका कारण गाउँका अधिकांश किसान धान बेच्न नआएको उनले बताए । सीमावर्ती भारतीय बजारमा पनि प्रतिक्विण्टल धानको मूल्य खाद्य संस्थानले तोकेकै बराबर भएकाले भारतीय बजार नजिक बस्ने कृषकहरूले उतैतिर गएर धान बेच्ने गरेका छन् ।
दोलखाका किसान बङ्गुर पालनतर्फ
पुस २०, दोलखा (अस)। दोलखाका किसानहरू बङ्गुरपालन व्यवसायमा आकर्षित भएका छन् । यो व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि किसानहरूको आकर्षा बढेको हो । सुन्द्रावती गाविसमा किसानहरू ‘सुन्द्रावती बङ्गुरपालन समूह’ गठन गरेर सामूहिक रूपमा यो व्यवसायमा लागेका हुन् । यो गाविस सदरमुकाम चरिकोटबाट करीब १३ किलोमिटर उत्तरमा पर्छ । सो गाविसका बासिन्दाले जिल्लामा भएको मासुको अभावलाई कम गर्ने उद्देश्यले बङ्गुरपालन शुरू गरेको बङ्गुरपालन व्यवसायका संरक्षक वेदचन्द्र उप्रेतीले अभियानलाई वताए ।
उप्रेतीका अनुसार कुल रू. ४ लाखको लगानीमा शुरू गरिएको सो व्यवसायमा हाल ६ जना शेयर सदस्य रहेका छन् । ‘बङ्गुरपालन व्यवसायबाट वार्षिक रू. ६ लाख नाफा कमाउने उद्देश्य लिएका छौं,’ उप्रेतीले भने, ‘व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने बङ्गुरका पाठा प्राविधिक पशु विकास फर्म जिरीबाट ल्याउने गरेका छौं ।’ एउटा पाठोको मूल्य रू. ३ हजार पर्ने पनि उनले जानकारी दिए । ‘२० ओटा बङ्गुरका पाठा किनेर ल्याएका छौं,’ उप्रेतीले भने । पाठाहरूको हेरचाह गर्न एक जना प्रविधिकको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
समूहबाट उत्पादन भएको मासु तथा बङ्गुर अधिकांश सोही जिल्लामै खपत हुँदै आएको छ । न्यून मात्र काठमाडौं, बाह्रबीसेलगायत बजारमा पनि आपूर्ति हुँदै आएको उप्रेती बताउँछन् । अहिलेसम्म सो व्यवसायमा कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी नरहेको उनले जानकारी दिए । ‘आगामी दिनमा बैङ्क तथा वित्तीय सङ्घसंस्थालाई लगानीका लागि आग्रह गर्नेछौं,’ उप्रेतीले भने । चालू आर्थिक वर्षमा समूहले १ सयओटा बङ्गुर उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ ।
एभोकाडो उत्पादन प्रविधि र बजार
एभोकाडो नेपाली फलफूलमा कम सुनिने नाम हो । यसलाई घिउफल पनि भनिन्छ । तर, बजारमा कमै मात्र पाइने भएकाले धेरै उपभोक्ता यस फलका बारेमा अनभिज्ञ छन् । असोजदेखि माघसम्म पाइने यसको खेती अझै व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । फाट्टफुट्ट विक्री केन्द्रमा देखिने हुनाले यसको मूल्य पनि चर्कै छ । पहिले विदेशीले मात्र खाने यो फलप्रति आजभोलि नेपाली पनि आकर्षित भएको देखिन्छ । अचेल सौर्न्दर्य प्रसाधनमा समेत यसको प्रयोग हुन थालेको छ । एभोकाडोको खेती धनकुटा, सर्लाही , काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा हुँदै आएको छ । तुषारो नपर्ने र ज्यादा हावा नलाग्ने पहाड तथा तराईमा यसको खेती गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
एकपटक लगाएपछि वर्षौंसम्म फल दिने यसको बिरुवा सरकारी एवम् निजी फार्महरूमा किन्न पाइन्छ । नेपालमा एभोकाडोको बीउबाट बिरुवा उत्पादन गरिए पनि अझै कलमी भने गर्न नसकिएको बताइएको छ । पोलिब्यागमा यसको बिरुवा पाइने भए पनि मङ्सिर, पुस र माघबाहेक अन्य महीनामा लगाउन सकिन्छ । जेठ र असार बिरुवा लगाउने उपयुक्त समय हो । लगाएको ५-६ वर्षपछि यसले फल दिन थाल्छ । हरियो बोट, ठूला पात र फल केही हरियो लाम्चो हुने भएकाले एभोकाडो फल सहजै चिन्न सकिन्छ । यो फल पाकेपछि प्याजी रङको हुन्छ । ठूलो रुख हुने तर जरा त्यति तलसम्म नजाने भएकाले हावा हुरीले यसलाई ढाल्न सक्छ । एक मिटर गोलाइ र गहिराइ भएको खाल्टो खन्ने, त्यसमा राम्रोसँग पाकेको ३०-४० किलो कम्पोष्ट मल राखी बिरुवा रोप्ने र वर्षेनि कम्पोष्ट मल तथा २००-८०-२०० ग्राम प्रतिबोटका दरले क्रमशः नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास राख्नुपर्छ । नेपालमा प्रतिबोट ३० देखि १ सय किलोसम्म एभोकाडो उत्पादन हुन्छ । यसको खेती गर्दा दुई बोटबीचको दूरी ८ मिटर हुनुपर्दछ ।
अहिले एभोकाडो धनकुटा, सर्लाहीको नवलपुर, काठमाडौंको कालीमाटीस्थित फलफूल तथा तरकारी बजारमा किन्न पाइन्छ । यसबाहेक सानेपा, पुल्चोकस्थित नमस्ते सुपर मार्केट र भाटभटेनी सुपर मार्केटमा पनि किन्न पाइन्छ । तर, मूल्य भने ठाउँपिच्छे फरकफरक रहेको पाइएको छ । केही ठूलो र एकनासको एभोकाडो नमस्ते सुपर मार्केटमा प्रतिकिलो रू. १ सय ५० र अन्य स्थानमा केही सानो रू. ७० का दरले पाइन्छ । यसो हुनुमा प्रतिस्पर्धा नहुनु र निश्चित ठाउँका निश्चित ग्राहकलाई लक्षित गरी विक्री गर्ने उत्पादकले ठाउँको बजार भाउ नबुझ्नु हो । खरीदकर्ताले केही नाफा राखेर विक्री गर्ने, उत्पादक वा मध्यस्थकर्ताले सधैं थोकमा लिनेलाई मात्र विक्री गर्ने तथा अन्य ठाउँ नचाहार्ने गरेकाले मूल्य फरक देखिएको हो । यसको विक्री पनि निकै सानो छ । कालीमाटीका रामकृष्ण दुवा आफ्नो पसलबाट हप्तामा १०-१५ किलो एभरेष्ट होटल, याक एण्ड यती, सोल्टी र गोकर्ण सफारीमा एभोकाडोको विक्री हुने र नेपालीले त्यति नकिन्ने बताउँछन् । नमस्ते सुपर मार्केटबाट भने दैनिक ५-१० किलो विक्री हुने बताइएको छ । यसले एभोकाडोको बजार अझै व्यावसायिक बन्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
नामैले घिउफल भएकाले बाहिरको पातलो बोक्रा निकाल्न र भित्रको बीउ गेडा वरिपरि भएको क्रिमलाई झिकेर दूध वा दहीसँग फिटेर खानापछि खान सकिन्छ । तारे होटेलमा सलादमा मेवा, स्याउ, केरासँगै एभोकाडो पनि मिसाउने गरिन्छ । प्रतिसय ग्राममा १ दशमलव ७ ग्राम प्रोटिन, खनिज १ दशमलव १, फ्याट २२ दशमलव ८ ग्राम, फस्फोरस ८० मिलिग्राम र क्याल्सियम १० मिलिग्राम पाइने खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बताएको छ । जेहोस्, नेपालका धेरै ठाउँमा लगाउन सकिने र पोषकतत्त्व भएको घिउफल लगाउँदा घरमा मात्र होइन, बजारमा पनि विक्री गर्न सकिने देखिन्छ ।